မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအိမ်တွင်းကြော်ငြာကြော်ငြာနည်းဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ခြင်း Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 15, 2009 တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 21, 2015 Adam အသေးစား
မိုဘိုင်းစျေးကွက် နေ့စဉ်ထွန်းသစ်စဖြစ်လာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည် Myrtle သဲသောင်ပြင်familyရိယာရှိမိသားစုထံသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာစရာပါပဲ။
Doug သည်သူ၏ site တွင်အလားတူမိုဘိုင်းပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည် 71813 မှ MartechLOG စာသား သူတင်သောအခါသတိပေးရ! ငါဖြတ်ခဲ့တယ် ကုဒ်တိုများ ဒီပုံထဲကနေဘယ်သူမှသူတို့ကိုစာပို့ဖို့သွေးဆောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကကြော်ငြာရှင်အတွက်ပိုက်ဆံပဲ။
မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်မဟုတ်ပါ။ မီးရှူးမီးပန်းဆိုင်တစ်ခုကမင်းကိုတောင်းဆိုနေတယ် “ BANG” ကိုစာတိုကုဒ်သို့ပို့ပါ အထူးကမ်းလှမ်းမှုအတွက်!
စာပို့ခြင်းအားကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ Ripley ရဲ့ Aquarium:
၎င်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်နောက်ထပ်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာတစ်ခုမှာကြော်ငြာရှင်ကိုသတိပေးရန်နှင့်သုံးစွဲသူ၏မိုဘိုင်းနံပါတ်နှင့်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ Ripley's Aquarium ကမ်းလှမ်းချက်အတွက်စာပို့မယ်ဆိုပါစို့။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကသင့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးစရာရှိလားမေးတယ်။
16:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 11
ဤသည်မှာ သမားရိုးကျ မီဒီယာများသည် နည်းပညာအသစ်များကို အသုံးချပြီး ဆက်စပ်မှုရှိနေပုံ၏ လက်တွေ့ကျသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းနှင့် အခြားမီဒီယာနည်းပညာအသစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အခြားသော သမားရိုးကျ မီဒီယာနည်းဗျူဟာများသည် ဘဝသစ်ကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကို အံ့သြစေသည်။
ဇွန် 14, 2012 မှာ 5: 32 pm တွင်
အံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါး၊ ၎င်းသည် အလွန်ပြည့်စုံပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါသည်။ အဲ့လိုပဲ
ငါ့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပြီး မင်းရဲ့ weblog က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သေချာပေါက် မျှဝေပေးပါ့မယ်
ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဒီ URL ဤ site.outdoor ကြော်ငြာကို အမှတ်အသားပြုထားသည်။